Umngeni Coins Factory - China Challenge Coins Abavelisi kunye nababoneleli
Fumana iingqekembe ezenzelwe wena ngexabiso lokukhuphisana elinamaxabiso aphezulu Ingqekembe nganye yemiceli mngeni inoyilo olwahlukileyo lombutho olumele wona, njengamasebe ezomkhosi, iiyunithi ezizodwa, amaqela akhethekileyo kunye nemisebenzi ethile. Amalungu enkonzo ayaziwa ngokuphuhlisa ingqokelela enkulu yemiceli mngeni ngexesha labo emkhosini. Baziva benekratshi kunye nemvakalelo yokuba lilungu xa bebonisa iingqekembe zabo ezahlukeneyo. Ukusukela ngo-1984, umzi-mveliso wethu unikezele ngezigidi zemiceli mngeni kwezomkhosi ngolwaneliseko oluyi-100%, ingqekembe yethu yabelana ngama-90% kwimarike yaseYurophu neyaseMelika. Iingqekembe zomceli mngeni zilungiselelwe ngokupheleleyo ukuba zilingane ngqo ngqo. Ukuguquguquka koyilo lokwenyani, unokukhetha ingqekembe enye okanye ezimbini zecala elinombala kwelinye okanye kumacala omabini. Ukuba unoluvo lokuba ufuna ukuzama, wabelane nathi, sisebenza nawe ukuqinisekisa ukuba uyilo lwakho luyinto yonke oyifunayo! Ukucaciswa ● Izinto eziphathekayo: i-alloy alloy, ubhedu, isilivere e-sterling ● Ubungakanani obuqhelekileyo: 38mm / 42mm / 45mm / 50mm ● Imibala: ukulingisa i-enamel enzima, i-enamel ethambileyo okanye akukho mibala ● Ukugqiba: ukukhanya / i-matte / i-antitique, iithoni ezimbini okanye iziphumo zesipili, amacala ama-3 wokucoca ● Akukho mda umiselweyo ● Iphakheji: i-bubble bag, ingxowa ye-PVC, ibhokisi ye-deluxe velvet, ibhokisi lephepha, isitendi semali, i-lucite efakwe
Ukulahla iiZinki zeAluminiyam zeZinki
Ingqekembe yeLiquid Glitter
Ukufa kweengqekembe zeBron Brass
Iingqekembe ze-Enamel zoMngeni